WebM: Maareynta qaabka muuqaalka furan ee fiidiyowga ee GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
WebM, sida Webka, waa qaab ah il furan waxaa abuuray Google, laakiin kiiskan loogu talagalay faylasha multimedia, taasi waa in la yiraahdo, fiidiyowyada badanaa. Waxaa sidoo kale la sii daayay dhowr sano, laakiin waa ka dib markii la bilaabay qaabka Webka.
Asal ahaan abuurista WebM diirada saaray hagaajinta maaraynta faylasha fiidiyowga iyada oo ujeedada ugu weyn ee ah in loo oggolaado soo saarista fiidiyowyada internetka qalab kasta habab ugu habboon.
Qaabkan cusub WebM tan iyo markii la aasaasay waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo si ka waxtar badan loona dhexgalo HTML5. Intaa waxaa dheer, in la isticmaalo ka mid ah VP8 iyo VP9 codecs si loo gaaro a riixo badan. Sidan oo kale in soo saaridda lagu samayn karo xitaa iyada oo leh awood yar oo xisaabeed.
Sidoo kale, sida horeyba looga ogaa dadweynaha, YouTube, sida hoosaad ka tirsan Google, ayaa hadda badalaya dhamaan fiidiyowyadaada WebM, iyada oo aan loo eegin qaabka feylka asalka ah, qaab sidaas ah markii fiidiyow la soo dejinayo tani waa qaabkeedii hore.
Si aad waxbadan uga ogaato WebP gudaha FromLinux Waxaad ka akhrisan kartaa qodobadii hore ee la xiriira:
Iyo inaad waxbadan ka akhriso qaabka Webka, wuu aqrin karaa qoraalkeenii hore tan, oo loo yaqaan:
1 WebM: Furan qaab muuqaal ah
1.1 Sawirada yar yar ee fiidiyowga ee WebM ee Thunar
1.2 Daaro oo wax ka beddel fiidiyowyada WebM
1.3 Qalabka tooska ah ee loo abuuro (loogu beddelo) fiidiyowyada WebM
WebM: Furan qaab muuqaal ah
Qaabka WebM leeyahay a degel rasmi ah halka lagu tilmaamay:
"WebM waa qaab bilaash ah oo boqortooyo ah, oo furan qaab feyl loogu talagalay webka".
"WebM wuxuu qeexayaa qaab dhismeedka weelka faylka, fiidiyowga iyo qaababka maqalka. Faylasha WebM waxay ka kooban yihiin fiidiyoowyo fiidiyoowyo ah oo lagu cabiray VP8 ama VP9 codec video iyo codadyo maqal ah oo lagu cadaadiyo Vorbis ama Opus audio codecs. Qaab dhismeedka faylka WebM wuxuu ku saleysan yahay weelka Matroska".
Sawirada yar yar ee fiidiyowga ee WebM ee Thunar
Geli ama xaqiijiso taas faylka la magacaabay «ffmpegthumbnailer.thumbnailer» oo leh amarka soo socda:
Tixraaca soo socda ayaa jira «video/webm» khadadka qaabeynta ee ka bilaabmaya «MimeType» Muxuu nuxurka u ahaa sidatan:
Dib u bilaw fadhiga isticmaalaha oo tijaabi adoo furaya thunar si aad u daawato thumbnails of images WebM.
Nota: Xaqiiji inaad xirmooyinka rakibtay «ffmpeg, ffmpegthumbnailer y libvpx5». Xirmadan ugu dambeysa waxaa laga yaabaa, iyadoo kuxiran Qeybinta iyo Keydinta, inay ku yimaadaan nooc kale, taas oo ah, «libvpx6 y libvpx7».
Daaro oo wax ka beddel fiidiyowyada WebM
Hawlaha noocan oo kale ah, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho caalamka fiidiyow VLC iyo tifaftiraha fiidiyowga Pitivi. Si ka duwan Webka, WebM waa mid guud oo caalami ah Barnaamijyada GNU / Linux, taasi waa, waxay leedahay taageero weyn inta badan Ciyaartoyda fiidiyowga iyo tifaftireyaasha.
Qalabka tooska ah ee loo abuuro (loogu beddelo) fiidiyowyada WebM
Haddii ay dhacdo, in aan gacanta lagu hayn GNU / Linux codsi wanaagsan oo loogu talagalay shaqada noocaas ah, in kastoo VLC shaqeeyaa si fiican u, iyo sidoo kale Mystic, had iyo jeer waxaa jira aalado badan oo wanaagsan oo khadka tooska ah looga beddelo waxyaabo badan, sida qaabab fayl ah. videos. Laakiin si gaar ah fiidiyowyada WebM waxaan kugula talineynaa isku day: Beddelaha internetka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan qaabka muuqaalka furan ee fiidiyowga loo yaqaan «WebM» waxaa sameeyay Google dhowr sano ka hor, iyo sida loo maareeyo fiidiyowyada qaabkan oo ah GNU / Linux; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » WebM: Maamul qaabka muuqaalka furan ee fiidiyowga ee GNU / Linux